Tafatafa miaraka amin’i Aleksandra Lun, teratany Poloney lasa mpanoratra malaza amin’ny teny Espaniola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2019 9:10 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, Italiano, Français, Español, українська, Nederlands, Ελληνικά, русский, Ўзбекча, 日本語, Esperanto , English
Fonon'ny bokin'i Aleksandra Lun “Los palimpsestos” tamin'ny Espaniôla ôrizinaly. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Mihabetsaka amin'izao taonjato faha-21 izao ireo Mpanoratra Exôfônika - izany hoe, mpanoratra amin'ny fiteny izay tsy tenin-dreniny – satria miditra sehatra manerantany ny fifindramonina ary mikoriana amin'ny zotra isan-karazany. Zava-dehibe ny manao fanavahana eo amin'ireo mpanoratra izay lehibe teo amin'ny tontolon'ny fiteny maro, toa ilay voatonona matetika, Vladimir Nabokov, sy ireo mpanoratra izay nianatra fiteny iray rehefa olon-dehibe ary nanapa-kevitra hanoratra amin'ny teny vahiny mandra-pahafatin'izy ireo. Iray amin'ireo ohatra ankehitriny momba ity tranga farany ity i Jhumpa Lahiri, Bengaley-Amerikana mpanoratra amin'ny teny Anglisy izay manoratra amin'ny teny Italianina amin'izao fotoana izao.
Ohatra iray hafa i Aleksandra Lun, mpiteny Poloney ary mpandika teny matihanina nanapa-kevitra indray andro hanoratra tantara foronina amin'ny teny Espaniôla, fiteny iray voafehiny tsara rehefa feno 19 taona izy. Taratry ny fifangaroan'ny fiteny ny tantarany: Azo jerena amin'ny teny Anglisy ankehitriny ny “The Palimpsests,” nivoaka tamin'ny taona 2015, izay mitantara ny fiainan'i Czeslaw Przęśnicki, mpanoratra Poloney nifindra nankany Antarctika izay nianarany ny fiteny [tsy tena misy] teo an-toerana ary nanoratra tantara tamin'izany fiteny izany.
Aleksandra Lun. Saripikan'i Mirna Pavlović. Nahazoana alàlana. Aleksandra Lun. Photo by Mirna Pavlović. Used with permission.
Niresaka tamin'i Lun momba ny zavatra mandrisika ny mpanoratra hanaraka fiteny vahiny tany am-boalohany aho, sy ny dikan'izany hoe mpanoratra malaza ivelan'ny kolontsaina niaviany.
Filip Noubel: Teraka tamin'ny fiteny Poloney ianao, nianatra teny Espaniola teo amin'ny faha-19 taona raha niasa tao amin'ny casino iray mba hamatsiana vola ny fianaranao tany Espaina, ary ankehitriny ianao dia mpanoratra malaza sady mpandika teny. Ahoana no nahatonga an'io fikisahana amin'ny fiteny io?
Aleksandra Lun: Raha mieritreritra ohabolana Czech izay milaza fa miaina fiainana samy hafa amin'ny fiteny rehetra fantatsika isika, dia nanana fiainana maromaro aho, satria azoko antoka fa nanana izany koa ireo mpamaky ny Global Voices. Araka ny kajikajy nataoko, dia mety ho 136 taona aho izao, izay mahakivy satria toa tsy mahazo tombontsoa fisotroan-dronono aho! Ny fahitako azy, dia tsy mbola nisy fiovam-piteny, noho ny zava-misy tokana fa mpanoratra aho amin'ny iray amin'ny fiainako.
Azontsika jerena ho toy ny mpampita hafatra ny fiteny, hevitra iray avy amin'ny rafitra teorika amin'ny fizika antsoina hoe teorian'ny tady (kofehy). Toy ny mpampita hafatra, mamaritra tantara samy hafa ny fiteny tsirairay, tantara izay miaraka mitranga amin'ny tantara hafa rehetra. Olona mametraka ireo tantara ireo fotsiny ny mpanoratra..
FN: Manoratra amin'ny teny poloney koa ve ianao? Maro ny mpanoratra fiteny roa na exôfônika matetika milaza fa ny fanoratana amin'ny fiteny iray vahiny tany am-boalohany dia miteraka elanelana izay manampy azy ireo hanambara zavatra izay mety ho sarotra amin'ny fitenin-drazany. Manaiky an'izany ve ianao?
AL: Ho an'ny “The Palimpsests,” nanadihady tranga momba ireo mpanoratra izay nanova fiteny aho: mpifindra monina malaza toa an'i Samuel Beckett, Ágota Kristóf, Joseph Conrad, Vladimir Nabokov, Emil Cioran sy ny hafa. Tsy nahita anona iombonana aho satria samy manana ny antony tsy nanoratany tamin'ny fitenin-dreniny izy rehetra. Ny sasany nandray fanapahan-kevitra manokana hanova, ny hafa kosa nanao izany tamin'ny fomba voajanahary. Ny sasany nivadika fiteny noho ny antony manokana, ny hafa ho an'ny varotra. Nilaza taloha i Joseph Conrad fa tsy nisafidy ny teny Anglisy mihitsy izy – fa ny teny Anglisy no nisafidy azy. Nilaza koa izy fa ny teny Anglisy ihany no fiteny hany hainy nosoratana, raha nilaza indray i Ágota Kristóf fa ho nanoratra tamin'ny fiteny rehetra izy. Misy isan-karazany ny safidy sy ny fanentanana, ary ara-drariny daholo izany.
Tsy afaka milaza aho fa tsy manoratra amin'ny teny Poloney satria manoratra amin'ny teny Poloney foana aho amin'ny dikanteniko. Saingy miresaka amiko amin'ny teny Espaniola ny fandaharan-teniko (muse), ka asa roa ny fandikana ny feon'izy ireo amin'ny teny Poloney. Momba ny halavirana voalaza fa ateraky ny fanoratana amin'ny fiteny hafa, heveriko fa miankina amin'ny fifandraisanao aminy izany rehetra izany. Amiko, ny espaniola no safidy voajanahary indrindra. Tsy hafahafa mihitsy toy ny miborosy nify ny mampiasa azy – mety tsy mahazo tombontsoa fisotroan-dronono aho, saingy mirehareha amin'ny fiarovana ny nifiko manokana.
Fonon'ny boky The Palimpsests amin'ny teny Anglisy. Sary avy amin'i Aleksandra Lun, nahazoana alalana.
FN: Miasa toy ny mpandika teny matihanina koa ianao. Ahoana no famolavolan'izany ny fifandraisanao amin'ny fiteny maro?
AL: Ny asan'ny mpandika teny dia mampatsiahy ny dokotera Frankenstein, satria mamono andinin-teny amin'ny fiteny iray ianao ary mamelona azy indray amin'ny fiteny hafa. Nopotipotehinao ny lasibatra, ary nanambatra azy ireo indray, ary manantena fa handao ny toeram-pitsaboanao ao anatin'ny fahasalamana tsara izy tsy toy ny mararin'i Frankenstein. Ao anatin'izany, dia very fiadanan-tsaina sy hevitra maro momba ny fiteninao manokana ianao. Faharesena mahasambatra izany satria manala aminao ny tantaran'ny kolontsaina iray manokana ary manokatra tantara lehibe kokoa sy mahazatra kokoa ho anao.
Fantatrao ankehitriny ny zava-mitranga eo ambanin'ny hoditra ary manomboka mahita fiteny mihoatra ny haavon'ny voambolana sy ny fanononana azy ianao. Hitanao ireo singa sy ny fifandraisana eo amin'izy ireo, na ny rafitry ny fehezanteny, ary azonao tsara fa iray amin'ireo safidy marobe ihany ireo. Ary manomboka manontany ny tenanao ianao hoe. Nahoana ny fiteny sasany no mampiasa mpamaritoetra voafaritra sy tsy voafetra? Amin'ny fotoana iray dia tsy maintsy lasa filàna mahery vaika sy feno misitery izany mba hizarana ny zava-misy amin'ny “zavatra fantatsika” ary “ny zavatra tsy misy na inona na inona haintsika momba azy”. Amin'ny maha olona iray avy amin'ny fiteny Slavika, izay ahitanay “zavatra” ihany, dia mahaliana ahy fa lehibe tamin'ny zava-misy samihafa toy izany isika.
FN: Raha ny fahitanao azy dia inona no dikan'ny hoe “mahafehy” na “tompon'ny” fiteny iray?
AL: Any Eoropa na Etazonia dia toa mifantoka be loatra amin'ny “fitenenana” fiteny iray isika, ilay fananana farany indrindra raha oharina amin'ny fieritreretana, fanofisana na fanoratana izany. Ankoatra io fitantarana io, izay vokatry ny didy jadon'ny fanapariahan'ny tontolo tandrefana, ny fiteny iray dia tontolo iray nofidinao hivelomana fotsiny. Raha miaina izany tontolo izany ianao, dia “mahafehy” ny fiteniny.
FN: Tena mahafinaritra ny bokinao, saingy mifantoka amin'ny lohahevitra saro-pady ihany koa ianao: ny mari-panondroana, ny fanilihana, ny fifindra-monina, ny sesitany ary ny faniriana hiaty. Ahoana no ifandraisan'ny fiteny amin'ireo lohahevitra ireo?
AL: Fitaovana fitantarana mahomby ny vazivazy satria mamerina ny refy. Rehefa mpifindra monina ianao, ny zavatra farany izay antenaina aminao dia ny mampihomehy. Raha miditra amin'ny kolontsaina hafa ianao, dia tokony hanana fihetsika toy ny hoe nasaina amin'ny fiaraha-misakafo ara-pomba ofisialy any amin'ny nenitoanao: mipetraka tsara, mihinana izay sakafo aroso anao, mangina sy mitsiky betsaka. Raha manana fahalianana amin'ny kolontsaina ianao dia afaka mihaino izay lazain'ny namana manam-pahaizana ao amin'ny nenitoanao, angamba mandray an-tsoratra ary avy eo miezaka mandika azy ireo ho an'ireo namanao sahirana, ireo izay tsy nasaina. Ny tsy andrasan'ny olona ho ataonao dia ny hahatongavanao any amin'ny nenitoanao ary miova ho Bob l'éponge ianao, mipetraka isaky ny te-hipetraka, mihinana mitsamitsamina ny burger tsy misy hena ary manomboka milaza vazivazy mampisaina.
Sarotra tanterahina ny fitoviana raha tsy misy vazivazy satria endriky ny fitoviana ny vazivazy.
FN: Nadika tamin'ny teny anglisy sy frantsay ny bokinao voalohany, ary eo an-dalana ny fandikana amin'ny teny holandey. Ahoana no tianao hamaritana izany? Amin'ny maha mpanoratra poloney? Mpanoratra Espaniola, satria ho adika amin'ny teny Espaniola ihany koa ny andiany faharoa ho avy? Na mpanoratra fotsiny ve?
AL: Azo lazaina ho Jack the Ripper aho, raha manome fahafaham-po ilay olona mamaritra ahy izany! Fantatro fa ho sokajiana ho anisan'ity na izany kolontsaina hafa izany aho, saingy tsy midika izany fa mila fantarina amin'ny marika iray aho. Ao anatin'ny tontolo tsy maharitra ianantsika, dia mety ho sokajy matanjaka sy tsy mitanila ny zom-pirenena, saingy iray amin'ireo tanjona kely indrindra izy io. Mamaritra ny iray amin'ireo toetranao ivelany amin'ny fomba fijery ara-tantara fotsiny. Tsy milaza na inona na inona momba anao ankehitriny ny pasipaoronao.
Hafahafa amin'ny tenany manokana ny hevitra literatiora nasionaly. Tsy misy sehatra ara-javakanto hafa nizara ho an'ireo sokajy ireo – tsy henontsika loatra ny momba ny “tarika rock Lithoaniana” na “mpaka sary Nizeriana”, sa ahoana? Misy antony marim-pototra ao ambadiky ny fizarazarana amin'ny zom-pirenena, satria voaaro amin'ny fiteny ny boky ary mila adika mba hahatongavan'izany any amin'ireo mpihaino tsy mahazo izany. Saingy rehefa voaaro indray izy, ny zavatra niainan'ny olombelona ao anatiny dia mitovy amin'ny boky navoaka mihoatra sisin-tany. Tsy dia mahaliana loatra ny mamaky pasipaoro, na dia lava be aza ny filaharana eo amin'ny seranam-piaramanidina. Manoro hevitra mafy aho mba hamaky ireo marika shampooing ao amin'ny efitra fidiovana.